HomePod waxaa laga iibiyay Mareykanka | Waxaan ka socdaa mac
Mid ka mid ah wararka xanta ah ee aan faallaynay mudo dheer ayaa ah imaatinka HomePod-ka cusub wuxuuna ku yimid qaab yar. Runtii ma jiri lahayn calaamado kale oo isbeddel ah haddii aysan ahayn xaqiiqda keydka Nooca cawl ee cirifka ayaa u muuqda inuu ka maqanyahay dukaanka khadka tooska ah ee Apple.
Dabcan warbaahintu waa tan ay u booddo iyo goorta ay ka garteen MacRumors ee saamiyada la'aan ayaa daabacday digniinta wararka ee ah in Apple ay soo saari karto qaab cusub. Waxa run ama run noqon kara wuxuu ku faafay sida dabka ka dhashay shabakadda oo halkan ayaan ku sharraxaynaa taas Apple waxaa ku jiri kara HomePod dib loo habeeyay soo bandhigiddii la filayay inay ahayd Maarso 16 ama 23.
Kuma fikirayno isbedel nashqadeed haddii kale diirada la saaray gudaha HomePod. Dhab ahaantii HomePod-yadaani waa kuwa ku hadla kuwa ugu awooda badan ee ay ku hayaan buugaagtooda laakiin dib u habeyn heer ah kuwa ku hadla, jajab ama xitaa wax cusub oo qalab ah ayaa jiri kara. Waa in la ogaadaa in dhammaan dhaqdhaqaaqyadan Apple ay suurtagal tahay mana meesha ka saarayno imaatinka nooc cusub.
HomePod-ka hadda waxaa laga heli karaa websaydhka Apple ee waddankeenna waxaana la bilaabay 2018-ka sidaa darteed gudaha waxaa lagu hagaajin karaa iyadoo la cusbooneysiinayo qayb. Shaki kama qabno inay Apple awood u leedahay tan laakiin waxaan sidoo kale macquul nahay oo aan aaminsanahay taas Bishaan Maarso isla wixii hore ayaa dhici kara, waxaan fileynaa aalado cusub oo aad u tiro badan. Waan arki doonaa waxa dhaca toddobaadyadan ka hor 23-ka, saamiga ayaa laga yaabaa inuu soo noqdo berri ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » HomePod waxaa laga iibiyay Mareykanka
Lululook Apple Watch Suunka Qaadista